Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/0/c/0/haldoornews.com/httpd.www/index.php:1) in /customers/0/c/0/haldoornews.com/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 699 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/0/c/0/haldoornews.com/httpd.www/index.php:1) in /customers/0/c/0/haldoornews.com/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 707 | Haldoornews
Mareykanka: Cumar Shoolli muxuu ka yiri qorshaha loogu musaafurinayo Soomaaliya?
Fannaanka caanka ah ee Soomaaliyeed, Cumar Cismaan Macaane oo loo yaqaannno Cumar Shoolli, ayaa walaac ka muujiyay in dalkii uu inta badan noloshiisa ku soo qaatay, carruur badanna uu ku dhalay laga tarxiilayo.
“Waxaa xaqdarra ah anigoo Mareykanka shan carruur ah ku dhalay oo ku soo koray kuna soo barbaaray, noloshayda kala barna Mareykanka joogay, in carruurteyda la iga diro oo ay halkaas ku dayacmaan,” ayuu Cumar Shoolli u sheegay weriyaha BBC Somali ee Mareykanka.
Waxa uu sheegay in dacwaddiisa ay haatan meel wanaagsan marayso, oo uu u maqanyahay racfaan uu ka qaatay go’aan hore looga gaaray. Haddaba maxay tahay sababta keentay in Soomaaliya dib loogu celiyo?
“2003 ayey aheyd markii aniga iyo wiil aan saaxiibbo nahay oo wata qaad ay booliska na istaajiyeen, booliska Mareykankana qaadka maandooriyayaasha ayuu ugu jiraa walow Soomaalida uu caadi u yahay, kaddibna maxkamadda ayaa nala geeyay,” ayuu yiri Cumar Shoolli
Hanjabaadda ururka Al-Shabaab
Fannaan Cumar Shoolli ayaa sheegay in hanjabaad joogta ah ay uga timaado ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya kuwaas oo farriimahooda ugu soo gudbiya baraha ay bulshada ku wada xiriiraan: “Dhowr jeer ayey isoo waceen [Shabaab] oo dhowr jeer ayey farriimo iisoo direen, oo baraha bulshada laga arki karo, dowladda Mareykankana way aragtay middaasi,” ayuu yiri Shoolli.
Bulshada Soomaalida ee ku nool waddanka Mareykanka ayuu ka codsaday inay gacan ka siiyaan in dowladda aanay tarxiilin maadama uu khatar ku wajihi karo dalkiisa haddii dib loogu celiyo.
‘Dowladda Mareykanka ayaa I leh meeshaas laguma gayn karo’
Waxa uu sharraxay sababta uu uga walwalyo in dib loogu celiyo dalkiisa hooyo “Waxaan uga walwalayaa dowladda Mareykanka ayaa i leh meeshaas laguma gayn karoo o ammaan kuma helaysid sababtoo ah caddaynta ayey arkeen.”
“Nin waddankiisa nacaayo ma jiro, aniga waddankeyga waan jeclahay oo shanta Soomaali ayaan ahay nin reer Xamar dhalad ah ayaan ahay,” ayuu sii raaciyay.
Shoolli ayaa u malaynaya in fankiisa uu gacan ka siiyay in dowladda Mareykanka aanay ku degdegin inay Soomaaliya u musaafuriso: “Sababtaas waxay aheyd inaan ahay nin fannaan ah oo Mareykanka ku soo koray, waxaan iskudayay inaan wax badan ka badelay fanka Soomaaliya.”
Fannaankan ayey dhibaato wayn weli ka haysataa go’aankii dawladda Maraykanku ku soo rogtay sanadkii 2008 dii, kaas oo ahaa in la tarxiilo kaddib markii lagu qabtay qaad sida uu sheegay.
Cumar ayaa bannaanka muddo sanada ah waxa uu ku joogay damaanad, wax uuna walwal ka muujiyay in dhawaan loo soo diri doono warqaddii lagu musaafurin lahaa.